Dadka Niger oo codkooda dhiibanaya - BBC Somali
Dadka Niger oo codkooda dhiibanaya
21 Febraayo 2016
Image caption Madaxweyne Mahamadou Issoufou ayaa Niger xukumayay tan iyo 2011-kii.
7.5 milyan oo ka mid ah dadka Niger ayaa saaka u dareeraya goobaha cod bixinta si ay u soo doortaan madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka.
15 Musharrax ayaa u tartamaya madaxweynenimada, waxaana ku jira madaxweynaha hadda xilka haya Mahamadou Issoufou.
Doorashooyinkan ayaa imaanaya ayadoo Niger ay wajahayso khatar xagga amniga ah oo ka jirta xudduudaha ay la leedahay dalalka Nigeria iyo Libya.
Madaxweynaha xilka haya wuxuu loollan ka haystaa 14 musharrax, oo uu ku jiro afhayeenkii hore ee golaha shacabka, Hama Amadou, oo iminka xabsiga ku jira isagoo wajahaya dacwad sida la sheegay ay ku lug yeelatay mid ka mid ah xaasaskiisa oo ah fadeexad la xiriirta carruur la tahriibinayey. Wuxuu beeniyey inuu ku lug leeyahay, isagoo sheegay in xarigiisa ay siyaasad ka dambayso.
Codaynta ayaa dhacaysa ayadoo ay xaaladdu kacsan tahay, tiro badan oo mucaaradka ka tirsanna ay xabsi ku jiraan.
Madaxweyen Issoufou oo xukunka qabtay 2011 ka dib muddo sannad ah oo awoodda laga wareejinayey milateriga, ayaa rajaynaya in uu mar labaad xukunka qabto.
Inkastoo ay dad badan u arkaan nin wax badan ka qabtay dhismaha kaabayaasha ilaa iyo daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada, ayey misna Niger waxay noqotay markii seddexaad oo xiriir ah meesha ugu liidata ee lagu noolaado sanadkii 2015, sida ku xusan qoraalka horumarka bulshada ee hay'adda UNDP.